thinzar's blog: June 2007
မြန်မာဘလော့ဂ်တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက် လိုမယ်ထင်တာလေးတွေ (၁)
မြန်မာ ဘလော့ဂ်တစ်ခု လုပ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်လေးတွေကို စုထားချင်တာနဲ့ ဒီပို့စ်ကို ရေးဖြစ်သွားတာပါ။ ကျမ ဘလော့ဂ်စလုပ်တုန်းကလည်း နည်းလမ်းတွေကို ဟိုပါတ်ရှာ ဒီပါတ်ရှာ နဲ့ လုပ်ခဲ့ရတာ.. တော်သေးတာပေါ့။ အရှေ့က စီနီယာ ဘလော့ဂ်ဂါတွေက အားလုံးနည်းပေးလမ်းပြ လုပ်ခဲ့ပေလို့။ အခုတောင် တန်းပလိတ် အသစ်ပြောင်းချင်တာ မပြောင်းရဲဘူးဖြစ်နေတယ်။ ကုဒ်တွေ ဟိုကလိ ဒီကလိထားတာ များသွားတော့ အသစ်ပြောင်းလိုက်ရင် မနည်း ပြန်ရှာ ပြင်ရမယ်။ ဒီတော့ ကိုယ် တန်းပလိတ်ပြောင်းချင်တဲ့ အခါ အခက်မတွေ့အောင်ရယ်၊ မြန်မာ ဘလော့ဂ်လုပ်ချင်တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါ အသစ်လေးတွေ လိုနိုင်မယ်ထင်တာတွေရယ်ကို ရှာပြီး တစ်နေရာထဲမှာ စုထားလိုက်ပါတယ်။
ဒီလို အကျိုးရှိတဲ့ ပို့စ်လေးတွေကို ရေးပေးခဲ့တဲ့ ဘလော့ဂ်ဂါများ အားလုံးွကို ကျေးဇူး တင်ရှိပါကြောင်း… (link ချိတ်ဖို့ တစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘလော့ဂ်မှာ လိုက်ပြီး ခွင့်မတောင်းနိုင်တာကို နားလည်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။)
၁။ ဘလော့ဂ် account ဖွင့်တာကိုတော့ အထူးတလည် မရေးတော့ပါဘူး။ ရှိပြီးပြီလို့ဘဲ ယူဆလိုက်ပါမယ်။
၂။ မြန်မာဘလော့ဂ်လုပ်ဖို့ အရင်ဆုံးဘာလိုလဲဆိုတော့ မြန်မာစာ ရိုက်တတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ အရင်တုန်းက ဝင်းမြန်မာ၊ ဝင်းကလောဆိုတဲ့ font တွေ သုံးခဲ့ပေမယ့် အခု အင်တာနက် စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ အကျယ်တဝင့် နေရာယူလာတာကတော့ UNICODE ဖြစ်တဲ့ ဇော်ဂျီ font ပါ။ ဇော်ဂျီကို သုံးနိုင်ဖို့ virtual keyboard ကိုလည်း သွင်းရပါမယ်။ အဲဒီဖောင့်ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး install လုပ်နည်း အပြည့်အစုံ အတွက်
• ဇော်ဂျီနဲ့ မြန်မာစာ ရိုက်ရအောင် (မောင်သန့်ဇင်)
၃။ ပြီးရင် ဘလော့ဂ်တန်းပလိတ် (blog template) မှာဇော်ဂျီ ဖောင့် assign လုပ်ဖို့ CSS coding တစ်ချို့ပြင်ရပါမယ်။ ဒီအတွက့်
• How to assign Myanmar3 font ဇော်ဂျီဖောင့် ကောင်းမွန်စွာ ပေါ်အောင်လုပ်နည်း (ကိုညီလင်းဆက်)
ပြင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် ပို့စ်တင်တိုင်း အဆင်ပြေအောင်အောက်က ပို့စ်လေးလည်း ဖတ်ကြည့်ပါ။
• Blogspot မှာ မြန်မာလို ရေးရတာ အဆင်ပြေအောင်... (ကိုမောင်လှ)
၄။ ဘလော့ဂ်တော်တော်များများမှာ ထည့်လေ့ရှိပြီး မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါတွေ ဆီဗုံးလို့ တင်စားထားတဲ့ cbox ကို ထည့်ချင်တယ် ဆိုရင်တော့
• Cbox အကြောင်း (ကိုရန်အောင်)
၅။ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်မှာ ဘယ်သူတွေ comment လာပေးသွားသလဲဆိုတာ ပို့စ်တစ်ခုချင်းစီ လိုက်စစ်နေမယ့်အစား နောက်ဆုံးပေးသွားတဲ့ comment တွေကို မြင်နိုင်အောင် ဘေးနားက sidebar မှာ recent comment widget ထည့်ထားမယ်ဆိုရင် ပိုအဆင်ပြေပါတယ်။ ဒီအတွက်
• Customizable recent comments widget (using JSON feed)
၆။ အပေါ်က blogspot က free ပေးထားတဲ့ comment service ပါ။ နောက်တစ်မျိုး သုံးကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Halo scan ကို သုံးလို့ ရပါတယ်။ ဘာကွာလဲဆိုတော့ ဘလော့ဂ်ဂါမှာက comment တွေကို delete ပဲ လုပ်လို့ ရတာ။ Halo scan က IP trace နဲ့ comment တွေကို edit လုပ်လို့ရတဲ့ feature ပိုတယ်လေ။ ပြီးတော့ recent comment widget အတွက် coding တစ်ခါတည်း ပေးထားတယ်။
• blog အတွက် comment tracking နဲ့ recent comment widget (သဉ္ဖာ)
၇။ ပို့စ်အရှည်ကြီးတွေကို ခေါက်သိမ်းထားချင်တယ်ဆိုရင် (read more.. ဆိုတာ နှိပ်လိုက်မှ ပို့စ်တစ်ခုလုံးပေါ်လာတာမျိုး..)
• Peek-a-boo Post (ကိုဝေယံလင်း)
၈။ နောက်တစ်ခုကတော့ eot ပါ။ နံပါတ် ၃ မှာ CSS coding တွေ ပြင်တာက ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို မြန်မာ ဖောင့်ရှိတဲ့ ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ ဖတ်လို့ရအောင်လို့ပါ။ eot ကတော့ မြန်မာ ဖောင့်သွင်းမထားတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေကနေ ကိုယ့်ဘလော့ဂ်ကို ဖတ်လို့ ရအောင် လုပ်ခြင်းပါဘဲ။ ဒီအတွက်
• eot လုပ်ရအောင် - ၁ (ကိုမောင်လှ)
• EOT လုပ်ကြည့်ခြင်း (သဉ္ဖာ)
၉။ ဒီလိုနဲ့ ဘလော့လေးတစ်ခု ဖြစ်မြောက်သွားပြီ ဆိုပါစို့။ တစ်ခါတစ်လေ ကော်နက်ရှင် မကောင်းရင် ဘလော့ဂ် စပေါ့က ဒုက္ခပေးတော့မယ်။ ပို့စ်တွေ အားလုံး ရေးလို့ ပြီးသွားရင် Connection time out ဆိုပြီး ပို့စ်တင်လို့ မရ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုး စိတ်ညစ်ရခြင်းတွေကို mail-to-blogger ဆိုတဲ့ feature က ဖြေရှင်းပေးပါလိမ့်မယ်။ မိမိရဲ့ gmail ကနေတဆင့် ပုံမှန် အီးမေးလ် ပို့သလိုဘဲ ပို့ရုံနဲ့ ပို့စ်တင်နိုင်မယ့် နည်းကို
• အီးမေးလ် မှ တဆင့် ဘလောက် ဘယ်လို လုပ်ရပါ့ (ကိုရဲမွန်)
၁၀။ ကိုစေတန်ဂေါ့ဒ် ရေးထားတဲ့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ လက်စွဲ ကို ဒေါင်းလုတ်လုပ်ပြီး လေ့လာကြည့်ပါ။
၁၁။ ကိုညီလင်းဆက် စုစည်းထားပေးတဲ့ Making Myanmar blog ဆိုတဲ့ ပို့စ်လဲ အရမ်း အသုံးဝင်ပါတယ်။
၁၂။ မြန်မာ ဘလော့ဂ်တွေ အတွက် tips and tricks တွေကို စုစည်းထားပေးတဲ့ MM Blogger Helpdesk မှာ အသုံးဝင်တာတွေ ရှာ တွေ့နိုင်ပါတယ်။
၁၃။ ဘလော့ဂ်နဲ့ ပါတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးမေးမြန်း ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မြန်မာ ဘလော့ဂ်ဂါ ဖိုရမ် မှာ ဘလော့ဂ်ဂါ ဂုရုတွေ ဖြေကြားပေးပါလိမ့်မယ်။
-- လိုအပ်မယ်ထင်တာလေးတွေ ဖြည့်ပေးကြပါနော်။ --
Hacking intro (2)
အစက Hacking series ကို ရေးမယ်လို့ ပေမယ့် အခုတလော စာနည်းနည်း ပိနေတာနဲ့ ဆက်မရေးဖြစ်ဘူး။ Hacking က လွယ်မယောင်နဲ့ ကျမအတွက်တော့ မလွယ်ဘူး။ Script Kiddy တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ မခက်ပေမယ့် hacker တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ အနည်းဆုံးတော့ network အလုပ်လုပ်ပုံ၊ computer security ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ server administration ဗဟုသုတတွေ လိုပါတယ်။
အောက်က hacking fundamentals တွေပါ။ နောက်တော့မှ Phase တစ်ခု ချင်းစီရဲ့ အကျယ်ကို တတ်သလောက် မှတ်သလောက် ရေးပါ့မယ်။
• Phase 1: Reconnaissance
• Phase 2: Scanning
• Phase 3: Gaining Access
• Phase 4: Maintaining Access
• Phase 5: Covering Attacks and Hiding
ကျမတို့နှစ်ယောက် စာအုပ်ဝယ်ပြီး ဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာကြသည်။ စာအုပ်ဆိုင်က လေးထပ်မှာ။
ကျမ။ ။ ဟေ့။ ISETAN မှာ ပစ္စည်း နည်းနည်း သွားဝယ်ရအောင်။
နို။ ။ ကောင်းသားဘဲ။ ဒါနဲ့ အဲဒီဆိုင်က သုံးထပ်မှာ မလား။
ကျမ။ ။ ဟုတ်တယ်လေ။ ဟော.. ဟိုမှာတောင် မြင်နေရပြီ။ အဲဒီဆိုင်ဘဲ။ ဒီဓာတ်လှေကားနဲ့ ဆင်းရအောင်။
နို။ ။ အဲဒါက ကြာပါတယ်ဟာ။ လှေကားနဲ့ ဆင်းရင်တောင် မြန်ဦးမယ်။ နင်ဟာလေ.. အပျင်းကို ကြီးတယ်။
ကျမ။ ။ ထားပါတော့။ ဆင်းပါ့မယ်။ ဘယ်မှာလဲ လှေကား ..
နို။ ။ ဟိုဘက်မှာ.. ဆိုင်းဘုတ်တွေ့တယ်မလား။
အစိမ်းရောင်နှင့် KELUAR/ EXIT လို့ ရေးထားပြီး လူတစ်ယောက် လှေကားဆင်းနေသည့်ပုံပြထားလျှင် လှေကားရှိမှန်း လူတိုင်း သိပါသည်။
ကျမ။ ။ ကဲ.. သွားကြတာပေါ့..
နို က တံခါးကို တွန်းဖွင့်လိုက်ပြီး ကျမအား အမြန်လာရန်ခေါ်သည်။ ကျမဝင်လိုက်ပြီးသည်နှင့် တံခါး lock ကျသွားသည့် အသံကို ကြားလိုက် သလိုလို။ သို့သော် အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့သာ။ လှေကား အထစ်နှစ်ဆယ်ခန့်ဆင်းပြီး ၃ထပ်သို့ရောက်လေပြီ။
နို။ ။ ဟာ။ ဖွင့်လို့ မရဘူးဟေ့။ တံခါး လော့ခ် (lock) ကျနေတယ်။
ကျမ။ ။ ဟယ်… ဟုတ်ပါ့။ ဒုက္ခဘဲ။ အပေါ် ပြန်တက်ကြရအောင်။
နို။ ။ ဒီတံခါးလည်း ဖွင့်လို့ မရတော့ဘူး။
ကျမ။ ။ နို.. တံခါးမှာ ဖတ်ကြည့်ဦး။ "One way door. Emergency exit only." တဲ့။
နို။ ။ ငါတို့တော့ သေပြီထင်တယ်။
ကျမ။ ။ အော်မနေနဲ့လေ.. ငါတို့ ဘယ်လို ထွက်နိုင်မလဲ ဆိုတာ စဉ်းစားကြတာပေါ့။
နို။ ။ ဟာသိပြီ။ ဖုန်း..ဖုန်း.. ငါ့ဖုန်း .. လိုင်းမိသေးတယ်ဟဲ့။
ကျမ။ ။ လိုင်းမိလို့ကော နင်ဘယ်သူ့ကို ခေါ်မှာလဲ။ ဒီ shopping mall ရဲ့ အရေးပေါ် နံပါတ်ကို ငါတို့မှ မသိတာ။ တခြားနည်း ကြံကြတာပေါ့။
ရုတ်တရက် "100 meters to Emergency exit" ဆိုတဲ့ ဆိုင်းဘုတ်ကို တွေ့လိုက်သည်။ ဒီလိုဆိုလျှင် ဒီအတိုင်းဆက်ဆင်းသွားတာနဲ့ အပေါက်ဝသို့ ရောက်နိုင်သည်။
ကျမ။ ။ ကဲ.. လှေကားအတိုင်း ဆက်ဆင်းကြတာပေါ့။
နို။ ။ ငါတော့ အရမ်းကြောက်နေပြီ။ အထဲမှာ တစ်ခုခု ဖြစ်သွားရင် ဘယ်လို လုပ်မလဲ။ ငါနင့်ကို အရမ်းအားနာတယ်ဟာ။ ငါခေါ်လို့ ဒီလို ဖြစ်ရတာ။
ကျမ။ ။ တိတ်တိတ်နေပါဟယ်။ နောက်မှဘဲ အားနာတော့။ ငါလဲ ကြောက်တာဘဲ။ အော်နေလို့ကော ဘာမှ ထူးမှာ မဟုတ်ဘူး။
သုံးထပ်.. နှစ်ထပ်.. တစ်ထပ်.. မြေညီထပ်.. lower ground floor.. အမှန်တော့ ဘယ်အထပ်ရောက်လို့ ရောက်နေသည်မသိ။ လှေကားရှိသလောက် ပြေးဆင်းလာခဲ့မိသည်။
နို။ ။ ဟေ့။ ထပ်ဆင်းစရာ လှေကားတော့ မရှိတော့ဘူး။ ငါတို့ ဘယ်နား ရောက်နေပြီလဲဟင်။
မသိ။ ထိုမေးခွန်းအတွက် ကျမ အဖြေ မရှိ။ လှေကားထစ်တွေက အလွန် ခြောက်ခြားစရာ ကောင်းနေသည်။ လူသံ သူသံလည်း တစ်ချက်မှ မကြားရ။ လှေကားဆုံးလျှင် ထွက်ပေါက်တွေ့မည်ဟု ကျမ တွက်ထားခဲ့မိသည်။ ဘာမှမတွေ့သောအခါ ကျမအလွန် တုန်လှုပ်သွားမိသည်။ လက်ကိုင်ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ လုံးဝ လိုင်းမမိတော့။ ဒါကိ ုသူမ သိလျှင် ပိုပြီးအော်တော့မည်။ ကျမ စိတ်ကို အတည်ငြိမ်ဆုံးဖြစ်အောင် ထားလိုက်သည်။
"xx meter to exit"
ဆိုတာတွေ့တော့ နည်းနည်းတော့ ဝမ်းသာမိလိုက်သည်။ သို့သော် အန္တရာယ်ဆိုတာ ဘယ်သူမှ ကြိုမမြင်နိုင်။ လမ်းရှိသလောက်တော့ ဆက်လျှောက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ shopping mall ထဲမှာ သားနားသလောက် ယခုနေရာက လုံးဝ တခြားစီ ဖြစ်နေသည်။ ဘေးနှစ်ဖက်နံရံနှစ်ခုကို အဝါရောင်ဆေးတွေ ပြောင်နေအောင် သုတ်ထားသည်။ ကြမ်းပြင်ကတော့ သမံတလင်း.. မျက်နှာကြက်လည်းမရှိ။ အပေါ်က ရေပိုက်လုံးများ ဝါယာကြိုးများကို အတိုင်းသား မြင်နေရသည်။ လမ်းကလည်း တဖြောင့်တည်း မဟုတ်။ ဟိုကွေ့.. ဒီပါတ်.. ဝင်္ကဘာ လျှောက်နေရသလိုလို။ (ရုပ်ရှင်တွေထဲကလို ) ဘယ်ချောင်ထဲကနေ ဘယ်လူဆိုးတွေ ထွက်လာမလဲဆိုတာ ရင်တထိတ်ထိတ်။ ပြန်ချရအောင်လည်း ဓားတွေ ဘာတွေ မပါ။ နိုက ကရာတေး တတ်တာဘဲဟု စိတ်ကို မနည်းဖြေနေရသည်။ ဒီ အဆောက်အဦးကို ဆောက်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကိုလည်း အပြစ်တင်နေမိသည်။ ဒီဇိုင်းဆွဲတဲ့ အာခီတက် (architect) ကိုလည်း မဆီမဆိုင် စိတ်တိုမိသည်။ အဆိုးဆုံး အခြေနေတွေကို စိတ်ထဲကတွက်နေရင်း ခြေလှမ်းကို တတ်နိုင်သမျှ မြန်အောင် လျှောက်နေမိသည်။
လမ်းတွေ့လျှင် လျှောက်သည်။ လမ်းဆုံးသွားလျှင် ကွေ့၍ ဆက်လျှောက်သည်။ ထို့နောက် ထပ်ကွေ့သည်။ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ။ အချိန်တော်တော်ကြာကြာ ထိုအထဲတွင် ကွေ့ရင်းပါတ်ရင်း နောက်ဆုံးတော့ တံခါးနှစ်ချပ်ကိုတွေ့လိုက်ရသည်။ ကန္တာရမှာ အိုအေစစ်ကို တွေ့လိုက်ရသောသူတစ်ယောက်လို ဝမ်းသာသွားမိသည်။
နို။ ။ ဟေ့.. ဟိုမှာ။ တံခါးတွေ့ပြီ။
ကျမ။ ။ ဟုတ်တယ်ဟေ့။
နို။ ။ ဖွင့်လို့မရဘူး။
ကျမတို့ နှစ်ယောက် ရှိသမျှ အားအင် ကုန်ခန်းသွားသည်။ ဘာဆက်လုပ်ရမလဲ။ အပေါ်ပြန်တက်ကြမည် ဆိုလျှင်လည်း မောပြီးသော်လည်းကောင်း ကြောက်ပြီးသော်လည်းကောင်း သေသွားနိုင်သည်။ ဖုန်းခေါ်ရအောင်လည်း လိုင်းမမိတော့။ ကျမတို့ဧ။် နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ကို နောက် တံခါး တစ်ချပ်ပေါ်တွင်ထားပြီး တတ်သမျှ မှတ်သမျှ ဘုရားစာတွေ ဆိုကာ တံခါးကို တွန်းလိုက်တဲ့ အခါမှာတော့…
အပြင်ဖက်မှာ မိုးက ဖွဲဖွဲ ရွာနေသည်။ မြေသင်းနံ့တွေကို တစ်ဝကြီး ရှူလိုက်သည်။ ထိုအခါမှ သက်ပြင်းဒုံးဒုံးချကာ တွေ့တဲ့နေရာမှာ ထိုင်ချလိုက်ပြီး တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက်ကြည့်ပြီး ပြိုင်တူ ပြုံးနိုင်တော့သည်။
မနေ့က ကျမနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ကြုံခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်ပါ။ ပြန်စဉ်းစားမိတိုင်း ကြောက်တုန်းဘဲ။ architect သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောဖြစ်တော့ တံခါးတွေကို ဘာလို့များ အဲဒီလို ဒီဇိုင်းလုပ်ထားသလဲ ဆိုတာကို အပြစ်တင်မိသေးတယ်။ အဲဒီအခါမှ သိလိုက်ရတယ်။ "one way" design လုပ်ထားတာက အရေးကြုံလာပြီဆိုရင် ထွက်ပြီးတဲ့လူက ပြန်မဝင်မိအောင်တဲ့။ လူဆိုတာ အန္ထရာယ်နဲ့ ကြုံလာရင် ဘာကိုမှ မစဉ်းစားနိုင်ကြတော့ဘူးမလား။ ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါတယ်။ ကျမတို့ကတော့ အဲဒီ "one-way door" ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာကို အီစိမ့်နေအောင် ခံစားလိုက်ရပါတယ်။ ဘယ်သူ့ကို အပြစ်တင်သင့်သလဲ။
၁။ ထိုတံခါးမှာ တစ်ခြားတံခါးတွေအတိုင်း EXIT လို့သာ ရေးထားသည်။ ရေးပါလား "EMERGENCY EXIT" ဖြစ်ဖြစ်.. တခြား တံခါးတွေနဲ့ ခွဲလို့ ရအောင်
၂။ "this is one-way door" ဆိုတဲ့ စာလုံးကို အလယ်နားလောက်မှာ စာလုံး ပိစိနှင့်သာ ရေးထားသည်။
ဒါကြောင့် မသိသေးတဲ့ သူတွေ သတိထားနိုင်အောင်လို့ပါ။ လှေကား ( အထူးသဖြင့် တံခါးပေါက်တွေနဲ့ ပိတ်ထားတဲ့ လှေကား) ဆင်းတော့မယ်ဆိုရင် တံခါးက "one-way door" ဟုတ်မဟုတ် အသေအချာ စစ်ပြီး ဆင်းကြပါလို့… ကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံ ခံစားကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် KLCC က Emergency exit (သုံးထပ်က ISETAN ရဲ့ ဘယ်ဘက်နားလောက်မှာ) ကနေ တံခါးကိုဖွင့်ပြီး အောက်ကိုသာ ဆင်းကြည့်ပါတော့။